Meelaha ugu sareeya ee Meeleynta bogagga ee Liiska 2017 ee SEO
Ma waxaad doonaysaa inaad dhisato tayo sarre leh oo sarre leh oo ah PR PostComments Backlinks. Aad bay u adag tahay in la helo liiska bogagga boggaga cinwaanka bogga 2017, ma aha? Weligaa ma isku dayday inaad ogaato liiska goobaha? Hadda ma jirto baahi loo qabo liiskaas sababta oo ah waxaan abuuray a boggaga internetka sare ee bogagga bogagga boggaga 2017 waayo halkan.
Soo qaado liis buuxa raacaan boggaga internetka dugsiga ITS Tech. Waxaan kale oo aan rabaa in aan kuu sheego habka shaqada iyo baahida bogagga internetka ee bogga bulshada. Waxaad abuuri kartaa dib u eegis tayo sare lehiyada oo la diiwaangelinayo tan arimahan liiska xarumaha calaamadaynta 2017. Waa inaad sidoo kale hubisaa tusmooyinka ansixinta deg dega ah dib u habeyn degdeg ah.
Waa maxay sawirrada bulshada?
Xarrumaha waa farsamada ama ikhtiyaarka laga helo boogaha kala duwan ee kombuyuutarradayada gaarka ah, taleefannada casriga ah iyo kiniinnada si loo badbaadiyo xiriirka gaarka ah ee bogga kaas oo loo adeegsan karo mustaqbalka mustaqbalka barashada ama tixraaca. Sidaa daraadeed bogga bulshada shaqada laakiin buugaagtaas waa kuwo online ah oo lagu badbaadin karo bogga internetka ee bogga internetka ee loogu talagalay tixraaca. Muuqaalka quruxda badan ee bogagga bogga bulshada ayaa ah in xubnaha kale ee boggaan boggeynta ah ay arki karaan oo ay wadaagi karaan boggaga aad ku keydsan iyo booqo bogga gaarka ah ee bogagaaga kaydsan. Waxaa jira gaadiid aad u weyn oo ku yaal goobaha bogga bulshada iyo taas oo sababtay inay jiraan fursado lagu helo gaadiidka tooska ah ee loo diro bogagga internetka.
Backlinks tayada waa arrin aad u muhiim ah in la helo darajo wanaagsan oo loogu talagalay ereyga muhiimka ah ee makiinadaha raadinta sida google. Waxaa jira waxyaabo muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad ogaato intaad soo gudbineyso URL-yada boggaga internetka boggaga bulshada:
Waa inaad dhameystirto dhammaan bogga bogga internetka ee bogga internetka. Ka bilaw magaca isticmaalaha dhammaan faahfaahinta bulshada, waa inaad buuxisid mid kasta iyo tiir kasta. Waxay ku siin doontaa kalsooni dheeraad ah & adoo gaari doona astaanta boggaaga bulshada.
Ha isbeelin liistada bogagga bogga bulshada adoo isku xiraya URLs badan oo ka socda isla goobta. Sidoo kale bogagga kale ku qor meelaha kale.
Upvote & sida jaantusyada kale si aad isku mid u hesho.
Isku day in aad qorto sharaxaad gaar ah intaad soo gudbiso bogga internetka ee kala duwan.
Dooro qaybta saxda ah & u soo dir website-kaaga qaybta ku habboon.
Sii dhumucda saxda ah ee la xidhiidha maqaalkaaga.
Ha ilaawin inaad xaqiijiso codsiga captcha ee ku qoran bogga intarnetka markaad soo gudbineyso bogga.
Iska ilaali xayeysiiska spam. Qaar ka mid ah boggaga cinwaanada bulshada waxay ku hayaan xiriiro qarsoodi ah iyo bogag kuwaas oo kugu hogaaminaya boggaga iyo bogga internetka.
Si aad u muujiso taxadar intaa le'eg isticmaal xiriiryada soo socda.
Hadda waxaanu soo aragnay boggaga internetka ee boggaga bulshada oo aad samaysay liis dhamaystiran Free High PR PR Raac adigoo raacaya boggaga boggeynta buugaag.
Goobaha Meeleynta Guryeynta ee Liiska 2017